SOMALILAND INAY TIMAADO SHIRKAN WAA LAGA MAARMI KARAA WAYNA KA MAARANTAA
Salaan qiimo badan oon u tebinayo bahda somalitalk ka dib waxan ka jawaab celinayaa suaashii walaalkeen Nuur beeldaaje ina waydiiyey oo ahayd
MA LAGA MAARMI KARAA IN SOMALILAND KA MAQNAATO SHIRKA SOOMALIDA ? jawaabtii oo kooban waa HAA runtii waaba laga maarmay waayo shirkiiba waa gebo gebo waxana la rajaynayaa mudo bil ama wax aan ka badnayn in dawlad lagu dhiso.
hadaba Somaliland oo iyadu hore u tashatay isna turxaan bixisay 1991 dawladna samaysatay ,wax badanina u qabsoomeen nabadna ku nool mowqifkeedana cadaysay booql jeer in aan shirarka heshiiska iyo dawlad dhexe loogu donayo soomalida inteeda kale ee is haysa aanay somaliland khusayn . waxa layaab leh in dad badani ku celcelinayaan sababta somaliland uga soo qayb geli la,dahay shirarkan ma dhalaysaka ah ama aan intii badnayd ba hano qaadin? madhalayska markaan leeyahay waxan u jeeda shirarkii kan embegati ka horeeyey, laakiin kan hada socda aniga oo jecel inuu najaxo oo soomalida joogtaa waxuun isku raacdo ay u dhan yihiin
anigoo jecel in walaalahayo wax u hagagaan oo aanay fursadan taagan seegin hadana waxan la yaabanahay shirka socdey labo sano waxa lagaga hadlayo ma ilma nebi aadan ayaa meesha ku garnaqsanaya ? runtii waa shirkii caalamka ugu modo dheeraa inta lagaranayo.hadaba hadii wadaninimo jirto ama daacadnimo waxan aamin sanahay in mudo bilo dhawra sidii soomaali land oo kale lagu heshiin lahaa
waxase muuqata in meesha ay jirto is aamin la,aan kala shaki iwm oo nin kastaaba kan kale iska eegayo si aanu udagin ama looga sed bursan hadii taasi timaadona waxa yimaada fashil iyo in aan waxba lagu heshiin karin .
saaxiib nuur beeldaaje hadii aanu hadeer shirkan somaliland ergo u soo dirato oo ah tan aad adigu ku dhiiri gelinayso waxa taas ka dhalanaya in umadan waqtigan nabada ku nool ee tashatay kala fur furanto oo qabiilo is baacsanaya isu rogto taas oo macnaheedu yahay sifir (sero) kasoo bilaaba ama duma! oo nala sinma
hadii aad midnimada soomaalida doonaysid tani maaha dariqii loo marayey, dariiqu waa in horta inta madasha fadhidaa wuxuun ku heshiiso oo iyadoo wada socota wax laysla eego lana wada hadlo hadii la midoobayo iyo hadii federaal laqaadanayo iyo hadii layska kal tegayoba
laakiin walaal NUUR horta intan hadeer dhisan daa ha dhisnaatee tusaale waxa kuugu filan puntland sida koonfurta maaha waxbay dhisatay shirkana way ka soo qayb gashay iyadoo nin keli ahi metelayo ayey fadhidaa hadii aanay hore wax u qabsan miyey suurto geli lahay in nin keli ahi magaceeda ku hadlo? maya e waxay iman lahahyeen iyagoo labaatan qabqable dagaal kala wataan oo is garab yaacaya shirkuna hadeer laba sano ayuu marayaa e wuxuu ku qaadan lahaa 4 afar sano
somalilandna haday timaado iyadoo qabiil ah oo is garab yaacay shirku imisuu qaadanayaa ? bal taas ka feker tan kale shacabka Somaliland waxba uma qabo umad weynta soomaaliyeed waxay wax u sheegaynayaan waa kuwii ka tirsanaa xukuumadii duntey ee masuuliyadii ay hayeen sida xun u isticmaalay kuwaana ama way ka aarsan ama way iska samaxi laakiin somaali tan koonfured ha ahaato ama tu kale waxba uma qabaan . walaal shuruudaha iyo wada hadal ku waqtigiisa ha gaadho e bal wuxuun ku soo heshiiya
Ma laga maarmi karaa Somaliland in ay shirka ka maqnaato [Nuur]